Ny toerana ara-barotra ao Sydney | Fitsangatsanganana tanteraka
Vonona ny hanao fampisehoana ve ianao? miantsena any sydney? Tsara avy eo andao hahafantatra ireo ivon-toeram-pivarotana, fivarotana ary ny ankamaroan'ny arabe ara-barotra.
Tamin'ny andiany farany dia nilaza taminay izahay fa ny iray amin'ireo làlana misy hetsika ara-barotra lehibe indrindra eto amin'ny firenena dia Trano fivarotana lehibe. Noho izany, tsy mahagaga raha tsy raisina ho toy ny faritra fivarotana lafo indrindra any Aostralia fa kosa izy no mitana ny laharana fahavalo eo amin'ny laharana manerantany.
Amin'izao fotoana izao, ity sakana ity, ny galeriany ary ny fivarotany dia nohavaozina mba hanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ny daholobe mpanjifa tsy ny firenena ihany fa ny any ivelany. Anisan'ireo magazay mandalo io fanamboarana io dia Westfield Sydney Central Plaza, izay ahitanao ireo vokatra lamaody, toerana fisakafoanana sy fivarotana fanomezana, handany ora maro hiantsenana. Afaka mahita ihany koa isika Westfield Center Point, fitambaranà magazay 140 sy ny Sky Garden, ankoatry ny hafa manana laza mendrika. Fantatrao izao, mandritra izao fotoana izao, misafidiana fivarotana hafa mandra-pisokafan'ny besinimaro an'ireo efa noresahinay.
Tsara ny manonona raha sahy manao ianao miantsena any sydney, fa ny ankamaroan'ny fivarotana ao an-tanàna dia manokatra ny varavarany manomboka amin'ny 9 maraina ary mihidy amin'ny 5 tolakandro.
Zava-dehibe ny fahalalana ihany koa fa ny iray amin'ireo faritra be mpamadika indrindra ao Sydney dia antsoina hoe ivon-toeram-pivarotana Mpanjakavavy Victoria na Mpanjakavavy Victoria. Toerana midadasika sy taloha izy (naorina tamin'ny 1898, na dia nohavaozina tokony ho 20 taona lasa aza) mba hividianana na dia ny tsy azo eritreretina aza.
Toerana iray hafa izay tsy azontsika lavina dia ny Ny arabe mpandeha an-tongotra Rocks, toerana feno tantara natsangana hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'ity faritra mpanjanaka tena tsara sy voatahiry ity dia hahita andiana boutique, trano fisakafoanana, fisotroana ary trano hipetrahana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Toerana ara-barotra any Sydney
Liliana Millan Morales dia hoy izy:
Tiako be ity firenena ity ary tiako ny hahafantatra azy miaraka amin'ny zanako sy ny vadiko
Ary angamba mety hipetraka amin'ity firenena mahafinaritra ity aho, raiki-pitia tamin'ny toerana rehetra aho
ny tontolo, ny toetrandro, ny olony tsy fantatro ny antony tokony hahatongavany eo
Valio i liliana millan morales
Zava-pisotro italianina mahazatra: manomboka amin'ny divay ka hatramin'ny espresso